Maraykanka oo muddo lix bilood ah kadib duqaymo ka fuliyey gudaha Somalia. – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
Maraykanka oo muddo lix bilood ah kadib duqaymo ka fuliyey gudaha Somalia.
Puntlandtimes (Muqdisho)-Dowladda Maraykanka ayaa markii ugu horraysay muddo lix bilood ah ka dib duqaymo cirka ah ka fulisey deegaamo katirsan Koonfurta Soomaaliya gaar ahaan duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Waaxda Gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa galinkii dambe ee Talaadadii shalay xaqiijisay inay ka dambeeyeen hal weerar oo ka dhacay meel u dhow magaalada Gaalkacyo, oo qiyaastii 580 Kilo Mitir dhanka waqooyi ka xigta magaalada Caasimadda ee Muqdisho.
Tallaabadaan ayaa noqonaysa duqeyntii ugu horreysay ee noocan oo kale ah muddo lix bilood ah, waana tii ugu horreysay oo la qaado tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden.
Taliska ciidanka Maraykanka ee Soomaaliya ayaa ka gaabsaday faahfaahin ka bixiyaan sababta duqeyntan loo oggolaaday ama in Taliska Mareykanka ee Afrika uu bilaabi doono inuu sameeyo olole aad u xooggan oo dhanka cirka ah oo lagu taageerayo ciidamada Soomaaliya, sida kuwa Mareykanka uu Soomaaliya ka geystay sanadihii la soo dhaafay.